That's so good, right?: February 2009
Growning Up in Africa (Ending)
“Oh oh , what’s this here?” James တစ်ယောက် ဘောင်းဘီဝတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ခပ်ဖောင်း ဖောင်းထောင်ထနေတာကို သူ့လက်နဲ့ ညင်ညင်သာသာလှမ်းထိရင်း ပြောလိုက်တော့ ခပ်တွန့်တွန့် တောင်ဖြစ်သွားမိသေးရဲ့။ ရုတ်တရက်အမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျသလို ဖီလင်ကို ခံစားလိုက်ရတော့ အားကိုးအားထား တန်းဘားတစ်ခုကို ဆွဲကိုင် ဖျစ်ညှစ်လိုက်မိတာပေါ့။ အဲ……ဒီ ဘားတန်းက နူးညံ့တယ်ဆိုတော့ သိပ်မဆွဲရဲပါ ဘူး……ဟီး။ သူရုန်းဖယ်တာလည်းမရှိ စကားဆို ငြင်းပယ်တာလည်းမရှိ….နှစ်ဦးသားမျက်ဝန်းချင်းဆုံ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ထိ အိပ်ယာပေါ်ကိုအတူလှဲ…..နောက်ခန္ဓာဗေဒတွေ အပြန်အလှန် လေ့လာသတည်းပေါ့။
သူ့ရဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်ကို ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ အတန်ကြာပွတ်သပ်ရင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ညှစ်လိုက် ကလိလိုက်လုပ်ခါ တဖြည်းဖြည်း အောက်ပိုင်းကို ရွှေ့ခဲ့တယ်။ သူ့ဘောင်းဘီရဲ့ အရင်းပိုင်းခွဆုံရှိရာဆီပေါ့လေ။ Woo……ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့ချစ်စရာ ရွှေလီးကြီးပါလား။ ဘောင်းဘီဇစ်ကို ခပ်သာသာဆွဲဖွင့်လိုက်တယ် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီထဲကနေ အပြင်ကို ဆွဲထုတ်လို့လွယ်ကူအောင်ပေါ့။တဖြည်းဖြည်းလျောကျသွားတဲ့ ဘောင်းဘီနဲ့ အတူ ပေါ်လာတဲ့ ရွှေပန်းကိုမြင်ရတာလေ……..အစိမ်းသက်သက်တစ်ယောက်က အခုမှ သူတစ်ပါးရဲ့ ပစ္စည်းကို စမြင် ဖူးသလိုမျိုး၊ ပြီးတော့ ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတာကို ထူးဆန်းစွာ ကြည့်မြင်ဖူးသလိုမျိုး……စိတ်ထဲမှာ တထိတ်ထိတ် …ရင်ခုန်နှုန်းပိုမြန်လာသလိုပါပဲ။
ရှက်ရွံ့သလိုမျက်နာလည်းပူတာနဲ့ ခေါင်းကိုတစ်ဖက်ကိုငဲ့မိပြန်တော့ ကျွန်တော့်ပခုံးကိုဖက်ထားတဲ့သူ့လက်တွေက ဆံပင်တွေကို ပွတ်သပ်ပေးသလိုနဲ့ တစ်ခုခုကိုလုပ် ဆောင်ပေး ရန် တွန်းအားပေးနေသလိုပဲ။ ဟင့်အင်….ဗျာ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေမဲ့သူက ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲကိုင်ယူကာ ထိပ်ဖူးဖောင်းဖောင်းကို ထပ်ကိုင် စေပြန်ကာ “You Like it?” တဲ့။ “Hell yeah, man…..but it’s so big.”
အမှန်တကယ်ကို James ရဲ့ ရွှေပန်းဟာ ကျွန်တော့်ဟာနဲ့ယှဉ်ရင်တော်တော်ကိုကြီးတာဗျ။ ၆လက်မနီးပါး ရှည်တယ် သိပ်ပြီးတော့ မတုတ်ဘူး။ ပုံမှန်အရွယ်အစားလို့ပြောလို့ရ တယ်။ သူ့ဟာကတော့ ဒီထက်ပိုမယ်ဗျ။ “ဘာလို့လည်းကွ ငါမြင်ဘူးတာကတော့ ငါ့ထက်ကြီးတာတွေချည်းပါပဲ။”
သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို လက်နဲ့ အသာဖွဖွပွတ်သပ်ရင်း “But when it’s not hard the skin….does it cover the head?”
“ ဟား ဟား… မင်းကလည်းလုပ်တော့မယ် ဒီဒေသမှာက ကလေးဘ၀ကတည်းက ထိပ်အရေပြားကို ဖြတ်ပေးကြ တာကွ”တဲ့။ သူပြောပုံအရဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်သိထား သလိုမျိုးပဲ Jewish kids တွေ ငယ်ငယ်ကတည်းက လိင်တံထိပ် အရေပြားဖြတ်ပေးကြတယ် ဆိုတာကြားဖူးနေတော့ သိပ်အံ့သြစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှမသိ သလို မျက်နှာပေးလေးနဲ့ အော်ဟုတ်လားပေါ့… ဟီး။
ကျွန်တော့်လက်ချောင်းများဟာ သူ့ဘောင်းဘီပေါင်တံကြားတစ်လျှောက် ဖွဖွပွတ်သပ်မိခဲ့သလို နူးညံ့တဲ့ အသားချောင်းစစ်စစ်ကို ဆွဲညှစ်မိပြန်ရော။ သူ့ရဲ့ သွေးခုန်နှုန်းတွေကို ရွှေဥလေးတွေကို ကလိရင်းသိခဲ့ရတာ။ ရုတ်တရက် စကားသံတွေတိတ်သွားသလို ဘာမှ ဆက်မလုပ်ဘဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြည့်နေမိကြတာ သုံးလေးစက္ကန့်မက။
သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ခြောက်သွေ့သွားသလားမသိ လျှာကလေးထုတ်ကာ ပွတ်သပ်လိုက်တာကို သတိထားမိပါရဲ့။ ခန္ဓာကိုယ်ခြင်း ပူးကပ်ထိုင်နေမိကြတော့ သူ့အသက်ရှူလေငွေ့ငွေ့ ကို ရရှိခံစားမိသလို ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ သူကြားမိမှာလည်း အသေအချာ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့ခေါင်းက ကျွန်တော့် မျက်နှာဆီငုံ့ကိုင်းလာရင်း…….. .နှုတ်ခမ်းဖျားများ၏ ဆွဲဆောင်မှုကို ဘယ်သူကမှ မရုန်းဖယ်မိတော့…..တက်မက်မိန့်မူးစွာ တရှိုက်မက်မက် အငမ်းမရ နမ်းရှိုက်မိကြလေသတည်း ဖြစ်ရပြီပေါ့။
ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး အရေပြားမွှေးညှင်းပါမကျန် ကျေနပ်မိန့်မူးမှုတွေနဲ့ တောက်လောင်နေသလို မာသထက်မာတောင်လာတဲ့ ရဲ့ ဒစ်အဆိုအရ သူလည်းပဲ အတော့်ကို ကျေနပ်သဘောကျနေပြီဆိုတာ ပြောနိုင်ပြန်ပါရဲ့။
ဒစ်ကိုပြည့်ပြည့်၀၀ကိုင်….အထက်အောက်ဘယ်ညာ နှေးလိုက်မြန်လိုက် stoke လုပ်ပေးနေမိသလို သူကလည်း ကျွန်တော့်ကို ပြန်လုပ်ပေးတာ…..အား…အ။ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာနဲ့ကလိတယ် ငုံစုပ်ပေးတာ အားဘယ်လိုဖီးလ် မှန်းမသိဘူးဗျာ….ရှီး….။ သူလဆာကျွေးပုံများ…အ …အ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ချက်ပေါက်ဆီကလိ…။ ဘောင်းဘီကို မရမက အတင်းဆွဲချွတ်တယ်ြ့ပီးပြန်တော့ ကျွန်တော့်ရွှေပန်းကို ကိုင်ကြည့်ရင်း သူ့ပါးစပ်ထဲဆွဲသွင်းလိုက်တာ။
သူများတွေလို ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ခါတည်း မစုပ်ဘဲ ဘာလုပ်နေမှန်းမသိ ခပ်ရွရွလေး ကစားနေတာ စိတ်ထဲ တကယ့်ကို အားမလို အားမရ ထိုင်ရမလို ထရမလိုဖီးလ်…အိုးဂေါ့ဒ်။ အင်း……..အား….အ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူစုပ်ပေးတာ ကောင်းလာတယ် နူးနူးညံ့ညံ့ကနေ ခပ်ပြင်းပြင်း Deep throat လုပ်ပေးတာ။ အချိန်နည်းနည်း ကြာတော့ သူ့ကို မတောင်းပန်လို့မရတော့ဘူး….။
“Stop James, please I’m there,…I’m there….Ohhhh ….please I’ll cum in your mouth.”
ဒါပေမဲ့ မာထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးတစ်ချောင်းလုံးကို သူ့အာခေါင်ထဲ အဆုံးထိတဖြည်းဖြည်းမျိုချလိုက်တာ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီးစပ်ထိကပ်တဲ့ အထိပါပဲလေ။ သူအဲဒီလိုငုံစုပ်ထားရာကနေ လျှာကလည်းက စားပြန်တော့ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်စွာ “man’s juice” တွေကို လည်ချောင်းထဲ ဒါရိုက်ဟစ် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက် တယ်။ ကျေကျေ နပ်နပ် တကယ့်ကို ကျေနပ်တယ် ထင်ပါရဲ့ နောက်ဆုံးတစ်စက်ကျန်တဲ့အထိသူမျိုချ စုပ်ယူ ပစ်လိုက်တော့….သူ့ပါးစပ်က ကျွတ်တဲ့အချိန်မှာ နည်းနည်းတောင် ပျော့နေရောဗျာ ကျွန်တော့်ရွှေလီး။
သူ့ဟာကို တပြန်ကိုင်ကြည့်တာ စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ စိတ်ထဲမှာ အားရမိသလိုပဲ ဘယ်လိုပြောရမလည်းတောင်မသိ။ ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ အထက်အောက် ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှား ပေးတယ်၊ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ခပ်ဖွဖွ ပွတ်သပ် ပေးတယ် ဒါပေမဲ့ သူအဲဒီလိုလုပ်ပေးတာလောက်နဲ့ ဖီးလ်မလာဘူးထင်ပါရဲ့။ ကဲ…..သူ့အတံကို ခပ်ပြင်းပြင်းလှုပ်ရှားပေးရင်း ရွှေဥလေးတွေကို တလုံးချင်းငုံစုပ်လိုက်တယ်….ပြီးတော့မှ လာရော့နောက်တစ်လုံး။ ဟင်း…….အောက်ပိုင်းကို လျှာကစားနေရင်း ကွမ်းသီးခေါင်းကို ငုံရုံလေးငုံလိုက်တယ် ထိပ်ပေါက်လေးကို ကလိ လိုက် တော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပြုစုလိုက်မှ ကိုယ်တော်က ရှီး…အား …အဆိုတဲ့ညည်းသံလေးထွက်လာတော့တာဗျ။
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းအစုံဟာ မိန့်မူးချင်စရာကောင်းတဲ့ ရွှေညိုရောင်လိင်တံတလျှောက် ပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစား နေတာ သူအရမ်းတောင့်တတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုထင်ပါရဲ့။ မာသထက်မာ တောင်လာပါရောလား။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို အားရပါးရစုပ် ပေးနေရင်း လက်ကလည်း တစ်ပြိုင်တည်း အဆင်မပြတ်ထုပေးဖြစ်တဲ့ အချိန်ရောက်တော့ James စည်းချက်နဲ့အညီ ကျွန်တော့်ခေါင်း အပေါ်အောက်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း ကော့ကော့ပြီး အချက်ကျကျ လိုက်ပါလာ တော့တာ။ အရေကြည်လေး တွေတောင် ငံကျိကျိခံစားရလာတယ်။
အား…အု…အု တစ်ခါတစ်ခါ ဆောင့်လိုက်လို့ လည်ချောင်းထဲ လျှောကနဲ့ ၀င်သွားရင် အသက်ရှူတောင်မှား ရတယ်။ အူး….ဒီဖီးလ်က ကြပ်မောအရသာပါလား။ အသက်ရှူ ရတစ်ခါတစ်လေ ခက်သလိုမျိုးခံစားရတော့ မောရတာပေါ့။ နှစ်ဦးသား တက်ကုန် ရွက်ကုန်ဖွင့်လိုက်ကျတာ ခဏကြာလာတော့ ရုတ်တရက် ကျွန်တော့် ခေါင်းကို ထိန်းကိုင်ရင်း သူ့ခါးကို ၀ိုက်ကာဝိုက်ကာ ဇကော်ဝိုင်းရင်း နှေးလိုက်မြန်လိုက် ဆောင့်ပါတော့တယ်။
သူ့အကြောပေါင်းတစ်ထောင်ဆုံရာ ရွှေအတံက ရသာရည်ကို ပန်းထုတ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ထောင်ထလာတာကို ခံစားရမိတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ကျွန်တော်ကလည်း ကွမ်းသီးခေါင်းကနေ ဟိုးရွှေဥတွေပါ ပါးစပ်ထဲဝင်တော့မတတ် ရှေ့တိုးနှောက်ငှင် ကျွန်တော်စွမ်းသမျှ ပြုစုတာပေါ့ သူ့ဆောင့်ချက်ကို အရှုံးမပေးရစေရေး။ အွန်း….. ထောင်ထနေတဲ့ အကြောကြီး တွေ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါသွားရင်း ဒုံးကျည်ပစ်လိုက်သလို ပန်းထုတ်ပစ်တာများ ပါးစပ်နဲ့ပြည့်လု ပြည့်ခင်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်နှစ်သက်တယ် ကြိုက်တယ်ဗျာ။ သူ့ပေါင်ခြံကြားဝင်နေရတာဘာဖြစ်လည်း။ ခန္ဓာကိုယ်အထိ အတွေ့ ကြွက်သားများမာဆယ်များရဲ့ လှုပ်ရှားတုန့်ပြန်မှု အပါအ၀င် James ရဲ့ သုတ်ရည်အနံ့၊ ချွေးနံ့တွေဟာ အသန့်ကြိုက် ကျွန်တော်ဂရုမထားမျိုချပစ်လိုက်ရအောင် စွဲမက်စေနိုင်ခဲ့တာအမှန်။ ရင်ခွင်နှစ်ခု ကပ်…..နှစ်ဦး သားနားတွေထဲ တဒုန်းဒုန်း အပြန်အလှန်ကြားခဲ့ရတဲ့နေ့လေးတစ်ရက်ပေါ့ဗျာ။
နွေရာသီ လိုက်ခဲ့တဲ့ခရီး တွေ့ခဲ့ရလူများစွာ ဒါပေမဲ့ ဒက်ဒီတပည့် အရွယ်မတိမ်းမယိမ်း James နဲ့သာတပူးတွဲတွဲ အာဖရိကရှိ နိုင်းလ်မြစ်တစ်ခွင်၊ သစ်တောစိမ်းစိမ်း သားရဲတောတွေဆီ အလည်အပတ်၊ လေ့လာရေးအဖြစ် ပါလှည့်လည်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်လေ ဒီကမပြန်ချင်တော့ပါ။ James ဆန္ဒကလည်းထို့အတူ။ ဒါပေမဲ…..
တွေ့ဆုံခြင်းဆိုတာ ခွဲခွာဖို့ဆိုတဲ့ အတိုင်းမကြာသောအချိန်မှာ ပြန်ရပါတော့မယ်။
နောက်နှစ်နွေရာသီ….တစ်ခုသော အားလပ်ရက်မှာ James နဲ့ပြန်ဆုံဖို့…..
ကဲ…လေ သူငယ်ချင်းတို့ရော ပျော်ရာမှာမနေတော်ရာမှာပဲနေရဖူးသလား…။ ကျွန်တော်ကတော့…..။
Posted by Alex Aung at 10:02 PM No comments:
Growing up in Africa (to be continued)
ကျွန်တော်တို့ အခုပဲရောက်တယ်။ ဒက်ဒီရယ် ကျွန်တော်ရယ် သူ့တပည့်မိသားစု တစ်ချို့ရယ်ပေါ့ဗျာ။ ခရီးရှည်ကြီးကိုဖြတ်သန်းလာပြီးနောက် ညဦးပိုင်းအချိန်လေးမှာပေါ့။ နွေဦးရာသီကျောင်းပိတ်ချိန်မှာ ဒက်ဒီ အလုပ်ရှိရာ ဒီဒေသကို လိုက်လာခဲ့တာ။ ဘာလို့မှန်းတော့မသိ အသားညိုညို ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း လူတွေကြားမှာ ရောက်နေရတာကို ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်နေမိတာအမှန်။ ခရီးကြောင့် ပင်ပန်းနေပေမဲ့ အိပ်ငိုက်တာတွေ မဖြစ် လန်းဆန်း၏။ ကျွန်တော်နေရမယ့် ဘန်ဂလိုအိမ်လေးကို ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့် ချစ်စဖွယ်အပြုံးပိုင်ရှင် လူညိုချောလေးက လိုက်ပို့တယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ ကျွန်တော့် အသက်ထက်ပိုပြီးကြီးမယ် မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အထင်တော့ ၂၉နှစ် ဒါမှမဟုတ် ၂၀လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ တောင့်တင်းသန်မာတာများ ကျွန်တော့်ထက်သာတယ်။
“My name is James.” သူ့နံမည်ကို စတင်ပြောဆိုပြီး မိတ်ဆက်တယ်လေ။ ကျယ်ကျယ် ၀န်းဝန်း ရှိတဲ့အခန်းကို သူကိုယ်တိုင်ဖွင့် အထုပ်အပိုးတွေ ကူသယ်ပေးရင်းပေါ့။ “I am Paul.” ကျွန်တော့်နာမည်ကို ပြန်ပြော ပြရင်း လက်ဆန့်ပေးလိုက်တော့ ၀မ်းသာအယ်လဲ အမူအယာနဲ့ ဆွဲကိုင်နှုတ်ဆက်ရင်း စကားတွေများ ပြောလိုက်တာ။
သူ့ပျူငှာဖော်ရွေမှုကို သဘောကျမိသွားတာတော့အမှန်။ “ကျွန်တော် တကယ့်ကို ၀မ်းသာတယ်ဗျ။ သူဌေးက သူ့သား အကြောင်းပြောပြော နေတာ။ အခုမှပဲ ခေါ်လာတော့တယ်။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာ ရေးထွက်ချင်ရင် ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပါ့မယ်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနေထိုင်စားသောက်ပုံတွေ၊ စိုက်ပျိုးခင်းတွေပါမကျန် ရောက်စေသိစေရမယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားအကြောင်းတွေကြားမိကတည်းက သဘောကျ ပြီးသားပါဗျာ” တဲ့။
သူ့ရဲ့လက်ကြီးကြီးထဲမှာ ကျွန်တော့်လက်ကို မလွှတ်ဘဲဆက်ကိုင်ထားရင်း ပြောနေတော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာက အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ ရှက်သွေးများဖျာနေရော့သလား…..ပူထူလို့ပါပဲ။ “အေး…….ငါလည်း တကယ့်ကိုဝမ်းသာပါတယ်။ မင်းနဲ့ခင်ရတာရော ပြီးတော့ အရာအားလုံးအတွက်ပေါ့။ တို့နှစ်ယောက် အရင်းနှီးဆုံး အခင်မင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူး”လို့ပြန်ပြော မိတာပေါ့လေ။ “That’s for sure” အပြုံးနဲ့ပြောရင်း ကျွန်တော့်အဖြစ်လေးကို ရိပ်မိဟန်တူပါရဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထား တဲ့လက်ကို ဖြေလွှတ်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်လက်မကို အသာအယာပွတ်ကိုင်ပြီးမှ လွှတ်တာတော့ ဘာသဘောများပါလိမ့်။
“အိုကေ….မင်းလည်း ပင်ပန်းနေတော့မယ်။ ဒီနေ့တော့ အိပ်စက်အနားယူပါဦး။ နက်ဖြန်ကျမှ ကိုယ်လာခေါ်မယ်” နူးညံ့အပြုံးလေးနှင့်ပြောရင်း အခန်းတံခါးကိုပါ အလိုက်တသိပိတ်ပေးသွားလေတော့ ရင်တွေကလည်းခုန်နေလိုက် တာ အသက်ရှူမမှန်ချင်တော့ဘူး။ မြန်မြန် အ၀တ်တွေချွတ် အေးမြမြရေတွေထဲ အမြန်ဆင်း…အားပါးပါး ခရီးကြောင့် ငြောင်းငြာနေတဲ့ ကိုယ်လက် တွေ အခုမှပဲ အငြောင်းပြေသွားတော့တယ်။ ရာသီဥတုက အေးမြနေပေမဲ့ ခဏနေက ဒက်ဒီတပည့် ကောင်ချော လေးကြောင့် ရင်ခုန်လှုပ်ရှားသွေးပူပြီး ချွေးပြန်တာတွေအတွက်…အိုကေ ပေါ့။
ရေချိုးခန်း ပြူတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဘန်ဂလိုရဲ့ နောက်ဘက်ခြံစည်းရိုးတလျှောက် အိမ်ပုလေး တွေ စီစီရီရီနဲ့ လှလှပပတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ရွာငယ်လေးပေမယ့် သပ်သပ်ရပ်ရပ် စနစ်တကျ။ ရေစိမ်ချိုးနေရင်း ပြတင်းပေါက်က တစ်ဆင့်ငေးမောနေချိန်မှာ ရွာထဲကလူတွေမှာတော့ အိပ်မောကျနေပြီထင်ပါရဲ့။ ထပ်ပြီး သတိ ပြုမိတာကတော့ ခြံစည်းရိုးကို ခါးအမြင့်သာသာလောက်သာရှိတဲ့ သစ်သားချောင်းတွေနဲ့ ကာရံထားတာကိုရော အပင်ပုလေးတွေ ၀ိုင်းရံနေတာကိုရောပေါ့လေ။ ရေချိုးခန်းတံခါးဖွင့်လိုက်ရင် ခြံစည်းရိုးက အပင်တွေနဲ့တန်းနေတာပဲ။
ဟူး….ရေချိုးပြီးတာနဲ့ အိပ်ယာထဲကို ဒိုင်ဗင်ထိုးဝင်လိုက်တာ။ ဒါပေမဲ့ မအိပ်ချင်သေးပါ။ စိတ်ထဲမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု တွေနဲ့ပြည့်နေသလို နွေရာသီ ဒီခရီးနေ့ရက်များဟာ James နဲ့အတူကုန်ဆုံးစေတော့မယ်ဆိုတာ အလိုလိုသိ နှင့် နေတော့ ဟီး…ဟီး…မထူးဆန်းဘူးလား။ He’s so cute…….. တောင့်တင်းထွားကျိုင်းတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို T-shirt နှင့် ဂျင်းဘောင်းဘီအောက်မှာကိုပဲ သိသာထင်ရှားနေတာဆိုတော့ အတွေးထဲမှာတောင် ပြန်မြင်ယောင်နေမိတာ အမှန်။
သူ့လက်နဲ့ ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲကိုင်နှုတ်ဆက်တုန်းကလည်း ပြည့်ပြည့် တင်းတင်း သူ့ပေါင်တံကြားမှ ခပ်ဖောင်းဖောင်း အရာနားကို မထိတထိ လှုပ်ရှားနှုတ်ဆက်သေးတာ အခုမှ ပြန်တွေးမိတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ပြည့်ပြည့်တင်းတင်း butt ကိုကြည့်တော့လည်း ဂျင်းဘောင်းဘီရဲ့ အောက်မှာ တင်းကားနေတာ မြင်ရသူ ရင်ဖိုစရာပါပဲ။ အဲဒါတွေ စိတ်ထဲပြန်မြင်ယောင်လိုက် ရင်ထဲတခုန်ခုန်နဲ့ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် toy-dick ကိုဆော့ကစားရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့မိတာပေါ့…ဟီး။
အခန်းတွင်းဘာတွေလိုအပ်နေသေးလည်း Check - in အတူဝင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ဦးသားစကားဘယ်ကစပြော ရမှန်း မသိကြတော့ ခုတင်ပေါ်မှအတူထိုင်ရင်း… “So you are not in school? Are you not still attending?” James enquired.
“Yeah.., ကျောင်းမှာပဲ ။ နောက်နှစ်နှစ်လောက် တက်ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တက်နေတဲ့ Account Diploma ရပြီ။ တော်တော်ပျင်းဖို့ကောင်းတဲ့ profession ပါပဲနော်။
” အို…ဒါပေမဲ့ ဒီမှာတော့ accountant တွေကို တော်တော် respect ပေးကြတယ်ကွ။”
“ဒါဆိုမင်းက အလည်သက်သက်ပဲပေါ့။ ပြီးတော့ဘယ်အချိန်ပြန်ရမှာလဲကွ။”
“I don’t know” အသံတွေများ တုန်ခါနေရော့သလား။ “I wish I could be here forever…” သူ့ကိုပြန်ဖြေတဲ့ ကျွန်တော့်အသံ သတိမထားမိခင် ၀မ်းနည်းသံပေါက်နေ သလားပဲ။ သတိထားပြီးထိန်းပါမှလေ အခုမှာတွေ့ ကြတာ မကြာသေးဘူးမလား။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုခုံးပေါ်သူ့လက်မောင်းနှင့် ပွေ့ဖက်ပြီး နှစ်သိမ့်သလိုသူဆိုတာကတော့ ” အဲဒါတွေ စဉ်းစား မနေပါနဲ့ကွာ ဒီကိုလာတုန်းလာခိုက် မင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နေတာကိုပဲ မြင်ချင်ပါတယ်။” သူ့ရင်ခွင်ကျယ် ကြီးဟာ ကျွန်တော်မှီခိုမှေးစက်ရာဖြစ်သွားချိန်မှာ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်ခွေတွေကို သူက ညင်သာစွာပွတ်သပ် ပေးနေပြန်တော့ ရင်ထဲတသိမ့်သိမ့် ကြည်နူးရပြန်ရော။ I loved it… ကျွန်တော့်နူးညံ့ပါးပြင်လေးနဲ့ သူ့ရင်ဘတ် မွှေးနုနုလေးတွေနဲ့ ထိတွေ့နေတာရော ညင်ညင်သာသာ ပွတ်သပ်နေတဲ့ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေရဲ့ အထိအတွေ့ကိုရောပေါ့။ ဘာဖြစ်မှန်း မသိပါဘူး ပေါင်ကြားက ညီဘွားက အတင်းခေါင်းထောင်ထတာများ ထောင်းကနဲ ငုတ်တုတ်။
Posted by Alex Aung at 10:00 PM No comments: